टाउको किन दुख्छ ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
७ मंसिर २०७६ १८ मिनेट पाठ
भाइबहिनी हो, तपाईंहरूलाई टाउको दुख्ने समस्या छ ? कुनै न कुनै बेला टाउको दुखेको होला। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू बुबा, आमा, दिदी, बहिनी जो कोहीले पनि केही समस्या वा तनाव भयो भने टाउको दुख्यो भनेर गुनासो गरेको पनि सुन्नु भएको होला ! यतिबेला टाउको दुखाइ धेरैको समस्याको रूपमा देखिएको छ। यो सबै उमेरकालाई हुन सक्छ। तर दुखाइ भने मान्छेपिच्छे फरक हुन्छ। कसैलाई चर्को र कसैलाई हल्का गरी दुखेको हुन्छ। त्यसै गरी कसैलाई धेरै दिनसम्म लगातार दुखेको हुन्छ भने कसैलाई पाँचदश मिनेट दुखेर कम हुन्छ त कसैलाई रिँगटा र बान्ता हुने गरी दुख्छ। दुखाइको मापन भने गर्न सकिँदैन। कोही एक व्यक्तिलाई हल्का दुखाइ भएको त्यही दुखाइ अर्कालाई चर्को हुन सक्छ। दुखाइको कुरा मान्छेको मानसिक स्थिति र उसको स्वास्थ्य अवस्थामा भर पर्छ।
भाइबहिनी हो ! धेरै मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर र टिभी एकोहोरो हेर्ने बानी छ ? जंकफुड जस्तै चाउचाउ, कुरमुरे, चिप्स जस्ता प्याकेटका खानेकुरा खाने बानी छ ? स्कुल छुटेपछि पानीपुरी र चटपटे खाने बानी छ ? धेरै रिस उठ्छ ? खानामा सागसब्जी र फलफूल नखाने बानी छ ? राति ढिला खाना खाने र ढिला सुत्ने बानी छ ? पानी कत्तिको पिउने बानी छ ? अमिलो, चिल्लो र पिरो कत्तिको मन पर्छ ? कोल्ड ड्रिंक्स र तयारी पेयपदार्थका साथै चिया, कफी कत्तिको खाने बानी छ ? गृहकार्य र पढाइकोे कत्तिको तनाव छ।
आज अधिकांश बालबालिका रङ्गीन विज्ञापनको प्रभाव र मिठोका लागि पसलका खानेकुरा खाने गर्छन्। अभिभावक पनि सजिलोका लागि पसलका तयारी खानेकुरा टिफिनमा पठाउँछन्। यस्ता खानेकुरामा बढी चिल्लो, पिरो र स्वादका लागि कृत्रिम चिज राखिएको हुन्छ जसले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। बालबालिका मात्र होइन, ठूलाहरू पनि स्वादका लागि यस्ता खानेकुराको पछि लाग्छन्। हाल कब्जियत, टाउको दुखाइ जस्ता समस्या यस्तै अखाध्य खानपानले भएको हो। त्यसैले अभिभावकले पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर घरकै खानेकुरामा जोड दिऔँ। साथै स्कुलका पनि शिक्षकले बालबालिकालाई स्वस्थवद्र्धक खाना खान प्रेरित गरौं। बालबालिका स्वस्थ भए मात्र सही तरिकाले पढ्न सक्छन्। भाइबहिनी हो, तपाईहरूले पनि आमाबुबालाई घरकै खाजा खान्छौ भन्न सक्नुपर्छ।
(महर्जन प्रकृतिप्रेमी समूहसँग सम्बद्ध छिन्।)
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७६ १०:१५ शनिबार